नेप्सेले बनायो ‘पिनबार क्यान्डल’, ‘शार्प ट्रेण्ड रिभर्सल’को संकेत ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»नेप्सेले बनायो ‘पिनबार क्यान्डल’, ‘शार्प ट्रेण्ड रिभर्सल’को संकेत !
नेप्सेले बनायो ‘पिनबार क्यान्डल’, ‘शार्प ट्रेण्ड रिभर्सल’को संकेत !
आज बिहिबार ४.९४ अंकले बढेर ०.२१ % वृद्धिको साथ नेप्से परिसूचक २३२५.४५ अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २३१ कम्पनीमध्ये १०० कम्पनी उकालो लागेका छन्, ८६ कम्पनी ओरालो लागेका छन् र १० कम्पनी स्थिर रहेका छन्।
कारोबार भएका तेह्र उप-समुहहरुमध्ये ८ उप-समुहको सेयर मूल्य उकालो लागेका छन् र बाँकि ५ उप-समुहको सेयर मूल्य ओरालो लागेका छन्।
बजार पुँजीकरण बढेर ३३ खर्ब ०७ अर्ब पुगेको छ।
NEPSE Daily Update: April 21, 2022
आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर बढेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः३७६) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी बढेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर ब्याण्ड भन्दा माथि २३२५ मा बन्द भएको छ। आज बजारमा सामान्य बिक्री बढेको र अन्तिम समयमा खरिद चाप भएको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स विश्लेषणले एमएसिडि लाइन जिरो लाइन भन्दा -७७ मा आएको देखिन्छ। हिस्टोग्राम नेगेटिभ ९ मा आएको छ जुन हिजोको भन्दा सानो बनेको छ। एमएसिडी लाइनले माथिबाट तलतिर सिग्नल लाइनलाइ क्रस गरेर तल निरन्तर गएको देखिएको छ। सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -६७ आएको छ। समग्र मुभिङ्ग एभरेजलाई हेर्दा बजारमा आज बिक्रि को होडबाजी भएको देखिन्छ र अन्तिममा खरिद बढेको देखाउँछ।
डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डिकेटरले आज +१४ डिएमआई लाइन तलतिर लागिरहेको छ भने -१४ डिएमआई माथि फर्किएको छ। सिग्नल लाइन +१४डिएमआई लाइन लाइ क्रस गरेर माथितिर निरन्तर गएको छ जसले ट्रेन्ड निरन्तर हुन सक्ने जनाउँछ । -१४ डिएमआई लाईन तल बाट माथि फर्किएको देखिन्छ जसले सामान्य बिक्री बढेको बुझ्न सकिन्छ।
आज नेप्सेले पिन बार क्यान्डल बनाएको छ जसले बजारमा खरिदकर्ता बढ्दै गएको जनाउँछ।
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -४४८१ देखि बढेर -४४६७ मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम ३३२९९९१ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम(३७६२२११) को ८९ प्रतिशत देखिएको छ।
नेप्से आज लोवर ब्याण्ड भन्दा माथि २३२५ मा क्लोज भएको छ। एमएसिडी लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -७७ मा आएको छ र सिग्नल लाईन पनि जिरो लाइन तल -६७ मा देखिएको छ भने हिस्टोग्राम नेगेटिभ ९ मा पुगेको छ जसले बजारमा बिक्री सामान्य भएको रअन्तिम समयमा खरिद बढेको बुझ्न सकिन्छ।
-१४ डिएमआई लाइन माथि फर्किएको छ भने +१४ डिएमआई लाईन तल तिर लागेको छ र एडिएक्स लाइन + १४ डीएमआइ लाइनलाइ क्रस गरेर माथितिर निरन्तर लागिरहेको छ जसले ट्रेन्ड निरन्तर हुनसक्ने जस्तो देखिएको छ। आज बजारमा बिक्रीकर्ताको मोमेन्टम सामान्य रहेको सङ्केत गर्छ। आरएसआइ आज २८ बाट बढेर २८.८ मा पुगेको छ आरएसआइको मोमेन्टम सामान्य बढेको जनाउँछ र बजार यतिबेला ओभर सोल्ड जोनमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।
नेप्सेको आगामी दिनको नजिकको सपोर्ट २२८७ देखिन्छ भने नेप्सेको नजिकको अवरोध २३७० को एरिया रहेको देखिन्छ।